यो एक आगो निभाउने आगो लड को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो भनेर चिनिन्छ। केही मिनेट लागि यो प्रयोग गर्दा आगो रोक्न। त्यसैले, एक प्रमुख र पहुँचयोग्य स्थानमा प्रत्येक संगठन स्थित गर्नुपर्छ आगो सुरक्षा को प्राथमिक साधन छ। अग्निशामक प्रकार आधारमा तिनीहरूलाई मा निहित पदार्थ मा। तिनीहरूले पानी, फोम, पाउडर, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन र अन्य अक्रिय ग्याँसहरु रसायन को रूप मा हुन सक्छ। यसको चुच्चो देखि आगो निभाउने को परिचय पदार्थ निर्मित गर्दा जो निभाउन र आगो छ। सामग्री उत्सर्जन धेरै उच्च दबाब हुन्छ।
प्रकार आगो समयमा प्रयोग Extinguishers, आगो को प्रकृति मा निर्भर। त्यहाँ चार सामान्य आगो कक्षाहरू, संवाददाता प्रतीक तोकिएको जुन। पहिलो वर्ग (एक) - ठोस कुरा जल, अपघटन सँगसँगै छ जो। यी काठ, कागज, र कपडा समावेश गर्नुहोस्। वर्ग बी पानी मा भंग नगर्ने तरल पदार्थ (बेन्जिन, पेट्रोलियम ईथर) को आत्म बलिरहेको, साथै घुलनशील घटक (रक्सी, Glycerol) comprises। यो वर्ग सी महामण्डल पदार्थ (प्राकृतिक ग्याँस, प्रोपेन) को ज्वलन बुझाउँछ। आगो वर्ग डी - जल धातु र तत्संबंधी मिश्र (धातु hydrides, organometallic यौगिकों)। वर्ग ई विद्युत आगो बुझाउँछ।
तरल को ज्वलन मा, ठोस र महामण्डल पदार्थ एक पाउडर रूपमा, अग्निशामक यस्तो प्रकार प्रयोग गरिन्छ। पाउडर जेट विभिन्न निर्देशनहरू मा flames सास थुनेर मार्नु गर्न उत्प्रेरित गर्न।
एक पटक यस गरेको छ, यो अन्तमा पत्र अलग foci ज्वलन पाउडर कवर गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया समयमा, यो भाँचिएको अंश पेश गर्न आवश्यक छ। तरल पदार्थ (वर्ग बी आगो) को दहन मा, धारा मुख्यतया समीपस्थ अन्त मा निर्देशित हुनुपर्छ। फिड पाउडर लगातार बाहिर गर्नुपर्छ। Wherein को वाल्व पूर्णतया खुला छ। ताकि उत्प्रेरित हुनुपर्छ फिर्ता र पक्ष छैन उल्लेखनीय क्षेत्रमा थिए, र दहन क्षेत्रमा पाउडर क्लाउड कायम हुनुपर्छ।
महामण्डल पदार्थ को ज्वलन मा, एक पाउडर स्प्रे सीधा ग्याँस प्रवाह मा ग्याँस को जेट गर्न लगभग समानान्तर निर्देशित हुनुपर्छ। विद्युत बुझाने जब (पाठ्यक्रम, डे-energized) निर्देशन गर्न पाउडर को एक जेट एक ज्वाला स्रोत दायाँ हुनुपर्छ। को आफ्नो जीवन आगो निभाउने (औसत मा) दस वर्ष छ।
गर्न आगो बुझाने क्लास बी (ज्वलन तरल) र वर्ग ई (बिजुली) प्रकार प्रयोग कार्बन डाइअक्साइड अग्निशामक मा। द्रवीभूत कार्बन डाइअक्साइड यसको मुख्य सक्रिय एजेन्ट छ। तिनीहरूले हात-आयोजित, मोबाइल र स्थिर छन्। मार्गदर्शन अग्निशामक 1000V को एक भोल्टेज भएको बिजुली प्रतिष्ठानहरु बुझाने। एउटा सानो बिजुली आकार, जो भोल्टेज अन्तर्गत हुन्, पाँच वर्ग मीटर को एक क्षेत्र मा प्रबन्ध ज्वलनशील तरल बुझाने मोबाइल प्रयोग। यो खराब हुँदा तिनीहरूले मामला मा प्रयोग गरिन्छ, उदाहरणका लागि, पानी को प्रयोग (आर्ट ग्यालरी, संग्रहालय र अभिलेख मा)। कार्बन डाइअक्साइड अग्निशामक को सेवा जीवन - अप दस वर्ष।
लगभग सार्वभौमिक लागू फोम अग्निशामक। तिनीहरूले एक रासायनिक फोम, alkalis र एसिड को समाधान प्राप्त, साथै हावा-यांत्रिक, हावा प्रवाह फोमिंग एक जलीय समाधान देखि गठन गरिएको छ जो प्रयोग कार्बन डाइअक्साइड को वा नाइट्रोजन।
अग्निशामक यस्तो प्रकार, aerosol रूपमा पनि छन्। तिनीहरूले ज्वलनशील बुझाने लागि प्रयोग गरिन्छ तरल पदार्थ, ज्वलनशील, को क्षारियधातु र अक्सिजन युक्त पदार्थ बाहेक साथै बिजुली, भोल्टेज अन्तर्गत विभिन्न सामाग्री। तिनीहरूले पाँच वर्ष को एक आफ्नो जीवन सीमित छन्।
एक पाउडर निभाउने, स्वचालित कैप-1 - त्यहाँ आगो निभाउने अर्को प्रकारको छ। मानव हस्तक्षेप बिना स्वचालित सञ्चालन - यो वर्ग ए, बी, सी र ई यसको मुख्य विशेषता को आगो मा प्रयोग गरिन्छ।
प्रत्येक एक आगो पत्ता लगाउने को मामला मा कि सम्झन गर्न superfluous छैन भने सम्भव, तुरुन्तै कल आवश्यक छ, आगो ट्रक।
कि kinematics अध्ययन? अवधारणाहरु परिमाण र कार्य
छालहरू को हस्तक्षेप
Norbert वीनर गर्ने हो? को "Cybernetics को पिता" को थिए?
कसरी ट्रेस बिना कम्प्युटरबाट Dr.Web हटाउन?
Luisa Ranieri: प्रतिभाशाली इटालियन अभिनेत्री
ड्रेकुला (Marvel हास्य) गणना: अमर वर्ण तीन मृत्यु
स्वादिष्ट chanterelles व्यञ्जनहरू यो जस्तै पकाउने प्रस्ताव प्रदान गर्दछ
फैशन - वर्तमान र भविष्य को कपडे
रिसीभर के हो
को अभिनेता "Desperate Housewives।" कति रूसी संस्करण को भूमिका voiced गर्ने शो, मा मौसम
- purr आदेश दिए जो Tweet: पशु बच्चाहरु को लागि लाग्दछ!